Tilmaame Parabolic SAR | vfxAlert official blog
Fursado faaiido leh oo leh Parabolic SAR
Dhammaan ganacsatadu way ogyihiin in macaashka ugu badan laga heli karo oo keliya iyadoo laga ganacsado isbeddellada. Ikhtiyaar waxaa lagu furi karaa "waqti dheer" dhicitaankiisa, taas oo suurtagal ka dhigeysa in si deggan loo sugo isku dhaca hadda jira iyo, liddi ku ah, ganacsi taxane ah macaamil ganacsi muddo-gaaban ah. Laakiin sida loo go'aamiyo goorta isbeddelku bilaabmay, ka sii muhiimsan, goorma ayuu dhammaan doonaa. Soo ogow sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee tilmaamaha 'Parabolic SAR'.
Magaca buuxa ee qalabkan isbeddelku waa "Parabolic Stop iyo Reverse" (P-SAR, joogsiga iyo dib u celinta). Waxaa soo diyaariyay ganacsadaha caanka ah ee reer Mareykan Wells Wilder, sharaxaad buuxda ayaa laga heli karaa buugiisa "Fikradda cusub ee falanqaynta farsamada".
Xisaabinta tusaha iyo dejinta
Marka la eego kor u kaca, qiimaha tilmaamuhu wuu ka sareeyaa haddii qiimaha xidhitaanka shumaca hadda jiraa uu ka sarreeyo kii hore oo uu u dhigmo mid hooseeya marka suuqa hoos u dhacayo. Isla mar ahaantaana, tallaabo kasta oo xigta, qiimaha xawaareynta (ACCELERATION) waa la labanlaabayaa shaxda tilmaanta ayaa "ugu dhowaanaysa" qiimaha. Sidan ayaad si aan toos ahayn u go'aamin kartaa xoogga dhaqdhaqaaqa hadda jira - markasta oo tilmaamuhu u dhow yahay, ayaa lagu kalsoonaan karaa calaamadaha degdegga ah ee istiraatiijiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Qaaciddada P-SAR waa sida soo socota:
Wixii wicitaano soo wac ah:
SAR (i) = ACCELERATION * (SARE (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
Fursadaha dayrta ee CALL:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOOS (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)
SAR (i - 1) - Tilmaame-baraha SAR-ga ee laambaddii hore;
ACCELERATION (AF) - qiimaha xawaaraha;
SARE (i - 1) - sicirka sareeya mudadii hore;
LOW (i - 1) - qiimo hooseeya muddadii hore.
Qiimaha dardargelinta bilowga ah waxaa loo dejiyay 0.02. Sidaa darteed, natiijada ugu dambeysa waxay noqon doontaa fogaan ah 2 boqolkiiba qiimihii hore max / min. Shumaca xiga, AF wuxuu ku kordhayaa 2% kale ilaa qiimaha ugu badan ee 0.20.
Qeybo ka mid ah isbeddel dheer oo ku wajahan 2-3 sare / hoos u dhac isku xigxig ah, qiyaasaha AF ayaa loo dejiyay 0.8, marka laga hadlayo sagaal xagal oo isku xigxigana, xawaaraha ugu badan ee 0.20 ama 20% ayaa la isticmaalaa .
Kordhinta xawaareynta bilowga ah waxay keeneysaa xasaasiyad weyn, taas oo saameyn togan ku leh hantida dhexdhexaadka ah iyo kuwa hooseeya iyo kal-fadhiyada ganacsiga (sida Aasiya on Forex). Iyadoo la raacayo, la qabsiga dhimista ayaa P-SAR ka dhigeysa mid "gaabis ah" tanina waxay kordhisaa isku halaynta calaamadaha Yurubta iyo Ameerika.
Parabolic SAR istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Istaraatiijiyaddu waa mid aad u fudud oo la heli karo xitaa kuwa bilowga ah: waxaan fureynaa CALL-ikhtiyaar marka tilmaamuhu tilmaamayo inuu ka hooseeyo shaxda qiimaha, siday u kala horreeyaan, PUT-option markay ka sarreeyaan qiimaha. Aan aragno tusaale:
Marka xigta, raac mabda'a aasaasiga ah ee ganacsiga isbeddelka: waxaan sugeynaa xaqiijinta qalabka kale iyo calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee dhabta ah, kiiskeenna; kuwani waa Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee Kooxaha Bollinger.
Faa'iidooyinka, faa'iido darrooyinka, talooyinka loo isticmaalo ...
Faa'iidada ugu weyn ee tilmaame waa caddayn. Looma baahna in la fiiriyo celceliska wareega ee iskutallaabta ama la xaqiijiyo in jabintu ay run tahay, taas oo dhibaato ku ah dadka bilowga ah, gaar ahaan marka ay jiraan dhowr celcelisyo dhaqaaq ah oo ku yaal shaxanka. P-SAR waxay u wareegtay dhinaca kale ee jaantuska qiimaha, waxaadna awoodi kartaa inaad furto / xirto ikhtiyaar. Tusaale istiraatiijiyad adag oo la adeegsanayo Parabolic - " Shot ".
Fududeynta muuqaalka ee arjiga ayaa leh hoos u dhac. Waxaa ka mid ah qalabka falanqaynta farsamada, waa MA oo leh ugu dambeynta ugu hooseysa ee la xiriirta suuqa hadda jira. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan lumin karin oo keliya qayb muhiim ah oo ka mid ah isbeddelka, laakiin sidoo kale waxaad ka geli kartaa suuqa falalka mala-awaalka ee ciyaartoy waaweyn, oo ay ku xigto dib-u-noqosho deg deg ah iyo dhicitaan aan faa'iido lahayn. Weligaa ha ku darin celcelisyo dheellitiran oo dheellitiran SAR-ka Parabolic, waxay kaliya jahwareerin kartaa xaaladda!
Laba hab oo caadi ah ayaa sida ugu fiican ugu shaqeeya hagaajinta saxnaanta calaamadaha: adoo adeegsanaya oscillators xad dhaaf ah / xad dhaaf ah (eeg qaybta istiraatiijiyadda ganacsiga) una beddelashada waqtiyada hore ee M30 iyo wixii ka sareeya. Waxaa jira "buuq" aad u tiro badan iyo calaamado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo u dhexeeya goolal yar yar!
Aan u gudubno doorashada taariikhda dhicitaanka. Xaaladdan oo kale, xuduudaha taariikhda uu dhacayo ikhtiyaarka ayaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo waqti ka weyn (ugu yaraan laba amar oo weynaan). Tusaale ahaan, М15, dhicitaanku waa inuu ka bilowdaa hal saac. Nidaamkani wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa lammaanaha is-bedbeddelaya iyo kuwa iskutallaabta sida EUR / GBP ama GBP / JPY.
Ganacsatada ikhtiyaariga ah ee bilowgu waa inay doortaan qaab ka duwan - si loo xisaabiyo dhicitaanka celceliska muddada isbeddelka, taas oo lagu muujiyay qayb kasta oo ka mid ah Parabolic. Hantida ganacsi kasta, way ka duwan tahay, laakiin saadaasha, waa ku filan tahay inaad eegto taariikhda ku xusan waqtiga la doortay ee ugu dambeysay 2-3 bilood. Tusaale ahaan sida loo isticmaalo dhicitaanka, bal aan eegno lamaanaha BTC / USD ee mudada M15:
Iyada oo ku saleysan jaantuska, celceliska muddada isbeddelka isbeddelka (17 + 12) = 29 shumacyo, hoos u dhaca ayaa noqon doona (15 + 18) = 33 shumacyo. Dhamaadka ugu badan ee lagu taliyay waxay u dhigantaa qaybta saddexaad ee celceliska qiimaha ama 10 shumacyo (30/3) ee waqtiga shaqada. Waa in la fahmo in xisaabinta noocan oo kale ah ee ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay yihiin qiyaas; waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula socoto xaalada taagan. Way fiicantahay marka isbeddellada celcelis ahaan ay sii dheeraadaan; waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaysan ku gaabin gaabinta sixitaanka degdega ah iyo dib u celinta!
Ha furin xirfadaha tilmaame waqtiga la sii daayo wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka. Halkan waxaad u baahan tahay istaraatiijiyad aan tilmaam lahayn adoo adeegsanaya xulashooyin kala duwan sida "Taabasho / Taabasho La'aan" ama "Dibedda / Joog Gudaha Dhexdeeda" iyadoo uu dhacayo wax aan ka badnayn 5-10 daqiiqo.
Soo koob . Parabolic SAR waa tilmaame farsamo oo muujiyay natiijo wax ku ool ah dhammaan hantida maaliyadeed (labada lamaane, saamiyada, mustaqbalka, xulashooyinka saamiyada). Waxay si kalsooni leh u muujineysaa isbeddelka isbeddelka, laakiin kaliya ku filan looxyada waqtiga "dheer". Iyo dabiici ahaan, waa inaadan u isticmaalin suuq dhinac ah (flat), xitaa haddii kala duwanaanta qiimaha isbeddelada ay yihiin 30-40 dhibcood. Way kafiican tahay inaad halkan ka daawato sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ay uga shaqeeyaan gudaha kanaalka, sida kooxaha Bollinger. In kasta oo lagu dhisay isla Celceliska Dhaqdhaqaaqa, calaamadaha soo noqoshada iyo jebinta soohdimahooda waa kuwo lagu kalsoonaan karo.